Shaxda Kooxda Ciyaartoydii Ugu Fiicnayd Ee Uu Cristiano Ronaldo Kaga Soo Garab Ciyaaray Man United, Real Madrid Iyo Juventus. - Gool24.Net
Shaxda Kooxda Ciyaartoydii Ugu Fiicnayd Ee Uu Cristiano Ronaldo Kaga Soo Garab Ciyaaray Man United, Real Madrid Iyo Juventus.
Cristiano Ronaldo waxa uu ka soo garab ciyaaray xidigo badan oo kubbada cagta magac wayn ku leh isaga oo waqtiyo kala duwan ku soo qaatay kooxaha Manchester United, Real Madrid iyo kooxdiisa hadda ee Juventus.
Ma sahlanaya in la soo xulo shaxda kooxda ugu fiican ee uu Cristiano Ronaldo ka soo garab ciyaaray maadaama oo ay jiraan xidigo aad u badan oo uu waayihiisa ciyaareed ka soo garab ciyaaray marka laga eego heerka kooxaha.
Shaxda kooxda ugu fiican ee ciyaartoyda uu Ronaldo ka soo garab ciyaaray waxaa goolka ugu jira kabtankiisii Real Madrid ee Iker Casillas kaas oo ay waqti fiican ku soo wada qaateen Bernabeu ka hor intii aan goolhaye Casillas qaab murugo leh looga dirin Madrid.
Difaaca dhexe ee shaxda kooxda ciyaartoyda uu Ronaldo ka soo garab ciyaaray waxaa kuwada jira Rio Ferdinand oo uu kaga garab ciyaaray Manchester United iyo xidiga ay saaxiibka dhaw ahaayeen ee Pepe kaas oo ay taageerayaasha kubbada cagtu aad u necbaayeen.
Xidiga kaliya ee ku jira shaxda ciyaartoydii uu Ronaldo ka soo garab ciyaaray ee ayna taageerayaashu jeclaysanayn in uu shaxda Ronaldo ku jiro ayaa ah Pepe laakiin xidhiidhka saaxiibtinimo ee Ronaldo iyo Pepe ka dhexeeyay iyo saamayntii ay Madrid ku soo wada lahaayeen ayaa ah mid aan layska indhotiri karin.
Sergio Ramos oo aan shaxdan ka maqnaan karin balse ay difaaca dhexe kaga jiraan Rio Ferdinand iyo Pepe ayaa Ramos loo badalay difaaca midig oo uu awood u leeyahay in uu ka ciyaari karo.
Waxaana afarta difaaca ah ee shaxda ciyaartoydii uu Ronaldo ka soo garab ciyaaray dhamaystiray saabkiisa ugu dhaw ee Marcelo kaas oo la filayo in dhamaadka xili ciyaareedkan uu Juventus kula midoobi doono Ronaldo.
Khadka dhexe ee shaxda kooxda ciyaartoydii uu Ronaldo heerka kooxaha kaga soo garab ciyaaray waxaa kuwada jira Luka Modric iyo Xabi Alonso kuwaas oo shaqo badan la soo qabtay Ronaldo waqtigoodii Real Madrid.
Paulo Dybala oo ay hadda Ronaldo ka wada tirsan yihiin Juventus iyo Ryan Giggs oo ay Manchester United kaga soo wada ciyaareen ayaa ku jira labada garab ee weerarka shaxda ciyaartoydii uu Ronaldo heerka kooxaha kaga soo garab ciyaaray.
Ugu danbayn waxaa weerarka shaxda xidigihii uu Cristiano kooxaha kaga soo garab ciyaaray ku soo wada baxay Karim Benzema iyo Wayne Rooney oo ahaa labadii xidig ee Ronaldo saamaynta ugu badan ee weerar la soo sameeyay waqtiyadiisii Real Madrid iyo Man United.
Halkan kaga bogo Shaxda ciyaartoydii uu Ronaldo heerka kooxha akaga soo garab ciyaaray oo dhamaystiran:
Miyay shaxdani tahay shaxda ugu fiican ee laga samayn karo xidigihii uu Cristiano Ronaldo kaga soo garab ciyaaray kooxaha Man United, Real Madrid iyo Juventus?
Khadar boss says:
Waxa Mascud ozil